ဂရပ်ဖစ် | Oleg Soloviev အနုပညာရှင်
Petrogradka. 50х90, ယာဉ်အမှတ်အသား။ 2005
ပက်ထရိုဂရက်ကဗလီ. 45х90, စက္ကူအနက်ရောင်, ဂျယ်ဖြူကလောင်အမည်။ 2005
စိန့်ပီတာစဘတ်, Pushkin ဥယျာဉ်. 96x43mm ကတ်ထူပြား, မင်,gouache. 2006
အိပ်ရာ. Peter-Pavel ရဲ့ခံတပ်. 80x40 ယာဉ်, မီးသွေးခဲတံ. 2002ဆ.
Pergamon ယဇ်ပလ္လင်. ရှေးဟောင်းပန်းပု. 110x70, စက္ဏူထူ, အမှတ်အသား, gouache. 2005
Stieglitz ပြီးနောက်အမည်ရှိအနုပညာစည်းဝေးပွဲခန်းမအကယ်ဒမီ. 110x70, စက္ဏူထူ, ခဲတံ, pastel. 2006
နွေရာသီဥယျာဉ်တော်. 80x30, Kraft, ကာဗွန်ခဲတံ. 2001
Rhino ပိုးတောင်မာပုံဆွဲခြင်း. 30x20, စက္ကူ, အမှတ်အသား, ဟီလီယမ်ခြံ. 2001
တစ် ဦး mantis ပိုး၏ပုံဆွဲ
Vitebsky ဘူတာ. 60x60, စက္ကူအနက်ရောင်, ဟီလီယမ်အဖြူကလောင်. 2005
Pergamon ယဇ်ပလ္လင်. ရှေးဟောင်းပန်းပု. 30x20 စက္ကူ, မင်. 2004
Pergamon ယဇ်ပလ္လင်. ရှေးဟောင်းပန်းပု. 70x70 ယာဉ်, အမှတ်အသား. 2004
Kamennoostrovsky ရိပ်သာလမ်း. 50х90, ယာဉ်အမှတ်အသား, pastel. 2005
ကိန်းဂဏန်းများနှင့်ဂရပ်ဖစ် - ကအမြဲမြှင့်တင်ရေးပစ္စည်းများကို၏အလှဆင်ဘို့ဆွဲဆောင်မှုဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည်, အတွင်းဖြစ်သော, မည်သည့်ပန်းချီဆရာများ၏အလုပ်အဖြစ်အခြေခံ. ကိန်းဂဏန်းများသာပုံစံမျိုး၏ Element တစ်ခုရဲ့အဖြစ်လိုအပ်မည်အကြောင်း,: တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကျောင်းသားများကိုအနုပညာ-ဂရပ်ဖစ်စှမျးတဲ့ professional ၏အကူအညီလိုအပ်, အဘယ်သူသည်ထိုသူတို့အဘို့လုပ်ဆောင်သို့မဟုတ်ပုံဆွဲပြုပြင်မွမ်းမံပါလိမ့်မယ်, အရည်အသွေးမြင့်စွမ်းဆောင်ရည်လုံလောက်သောအချိန်မပါလျှင်, သို့မဟုတ်ခေါင်းစဉ်လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်ပေါ်စေပါဘူး. ငါသည်သင်တို့ကိုတတ်နိုင်သမျှ အမိန့် drawings နဲ့ဂရပ်ဖစ် အရည်အသွေးမြင့်၏: ငါစတိုင်များအမျိုးမျိုးအတွက်အလုပ်လုပ်, ကွဲပြားခြားနားသောပစ္စည်းများနှင့်အတူ, ဒါတောင်မှအများဆုံးတောင်းဆိုမှုများဖောက်သည်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်အတူစိတ်ကျေနပ်မှုဖြစ်လိမ့်မည်.
ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်း ငါ၏အစွမ်းဆောင်မှုထဲမှာကတ်ထူပြားပေါ်မှာပုံကြမ်းသာပါဝင်သည်, ယာဉ်စက္ကူသို့မဟုတ်မူပန်းချီ. ကျွန်မကွန်ပျူတာဂရပ်ဖစ်အဖြစ်အလုပ်လုပ်ဖို့, ဒါကြောင့်ငါလုပ်နိုင် အမိန့်မှ:
• ပုံစံဒီဇိုင်း ကုမ္ပဏီလိုဂို;
ငါကျယ်ပြန့်အတွေ့အကြုံနှင့်အတူအနုပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်းကို, လူထု, အဘယ်သူသည်နေ့စဉ်သူတို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတိုးတက်စေနာရီခုထဲက. ငါကွဲပြားခြားနားသောနည်းစနစ်များနှင့်ပုံဆွဲနည်းစနစ်ကိုသိရ, ဂရပ်ဖစ်တက်ဘလက်အလုပ်လုပ်နှင့် '' အစဉ်အလာ '' ပစ္စည်းများ - ပတ္တူ, စက္ကူ, etc. သငျသညျခနြိုငျ, ငါ၏အမှုရှိသမျှတို့ကိုသင့်လိုအပ်ချက်နှင့်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းလိမ့်မည်ဟု, ရှိအောင်နှစ်သက်ကွညျ့ရှု. ပုံဆွဲသို့မဟုတ်ဂရပ်ဖစ်အားလုံးသူမ၏တာဝန်ပေးအပ်တာဝန်များကိုဖြေရှင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်: ဒီလိုဂိုပါလျှင်, ထို့နောက်သူကသင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအသိအမြင်ပေါ်မှာအလုပ်လုပ်နှင့်အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်ကြလိမ့်မည်, သငျသညျလက်ဆောင်တစ်ခုအဖြစ်ပုံဆွဲအမိန့်ပါလျှင် - ကဆက်ဆက်စိတ်တော်နှင့်အံ့အားသင့်စရာများအပြင်လိမ့်မယ်, အဘယ်သူသည် prepodneson ပါလိမ့်မယ်. ငါ၏အမှုကိုထိရောက်စွာအတွင်းပိုင်းကိုကြည့်ရှု, နှင့်ကျောင်းသားရေးဆွဲအမြဲတန်ဖိုးထားကြသည်, သူတို့လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီအဖြစ်, ဆရာ, ဆရာမများကသူတို့အပေါ်မှာချမှတ်.
မည်သည့်ရှုပ်ထွေးမှုအကျင့်ကိုကျင့်၏သေဒဏ်စီရင်၏အရည်အသွေးမြင့်မားခြင်းနှင့်ထိရောက်မှု, မူရင်းလုပ်ဆောင်, အခြားအနုပညာရှင်များအဆိုပြုချက်များနှင့်ဒီဇိုင်နာများမှငါ့အလုပ်ကိုခွဲခြားကားအဘယ်သို့ကြောင်း - သင့်ဆန္ဒကိုအညီသီးသန့်အကျင့်ကိုကျင့်၏ဖန်တီးမှု.
ငါဆိုအမိန့် execute ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်၏! addressing, ရန်မမေ့မလြော့ပါ:
• သင်တို့သည်နောက်ကွန်ပျူတာဂရပ်ဖစ်လိုအပ်ခဲ့လျှင်, ထို့နောက်ပစ္စည်းများကို select, သငျသညျအလုပျကိုမြင်ချင်ပါတယ်အရာ (စက္ဏူထူ, ပိုက်ဆံချည်ထည်ပိတ်, Kraft; ရုပ်ပုံအမှတ်အသား, ခဲတံအတွက်, ဂျယ်လ်ခြံ, မှင်, etc);
• အဆိုပါပုံဆွဲဘို့ရှိသမျှကိုလိုအပ်ချက်များကို, ဥပမာအား, အလိုရှိသောစတိုင်, အသေးစိတျအပျေါအာရုံ, etc.
အကြှနျုပျ၏အလုပ် - အမြဲတမ်းကျွမ်းကျင်ပိုင်၏ quintessence ဖြစ်ပါသည်, တီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့်အတူ၎င်း၏ symbiosis, ထိုကွောငျ့ drawings နဲ့ဂရပ်ဖစ် - ကသာအတွင်းပိုင်းအလှဆင်မဟုတ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်လည်းအမြတ်အစွန်းများအတွက် tool ကို, သငျသညျစီးပွားဖြစ်ရည်ရွယ်ချက်များအဘို့ထိုသူတို့သုံးနေလျှင်!